Baastada, sabuuradda uu macOS runtii u baahan yahay | waxaan ka imid mac
Mid ka mid ah hawlaha ugu soo jiidashada badan ee Windows 10 iyo Windows 11, waa mid aan la garanayn isticmaalayaasha badan, ugu yaraan dhammaan kuwa aan haysan baahida inay si joogto ah ula shaqeeyaan sanduuqa. Windows 10 iyo Windows 11 labaduba waa noo ogol yihiin Ku kaydi dhammaan waxyaabaha aan ku koobiyayno sabuuradda oo geli mar alla markaan rabno.
Haddii aad la yaabto, waxaan ku geli karnaa adigoo riixaya furaha Windows + v, halkii aad ka isticmaali lahayd kantaroolka dhaqanka + v. Haddii aad raadinayso kilibboodhka macOS oo daryeelaya maamul dhammaan nuxurka aad ku koobiyayso adiga oo aan dib u qorinWaa inaad isku daydaa Baasto, codsi noo ogolaanaya inaan u maamulno sanduuqa sida inuu yahay warqad xusuus qor ah.
Baastadu waa codsi noo ogolaanaya inaan maamulno dhammaan waxyaabaha aan ku koobiyayno sanduuqa iyada oo xaddidan 20 gooyo nooca bilaashka ah. Haddii aad si joogto ah u isticmaashid shaqadan, laakiin aadan ahayn hab aad u baahan, xalka Pasta na siiya waa mid cajiib ah.
Laakin, ma aha oo kaliya in ay noo ogolaato in aan ku kaydino dhammaan waxyaabaha ku kaydsan sanduuqa, laakiin sidoo kale waxa ay noo ogolaataa abaabul jeexjeexyada ururinta, waxaa ku jira nidaam raadin awood leh si aan u helno waxa aan raadineyno wakhti kasta oo leh interface aad u fudud.
Interface ee qaabka shabagga ah, noo ogolaadaa dhaqso u hel nuxurka aanu dhawaan nuqul ka samaynay. Waxaan ku furi karnaa arjiga iyada oo loo marayo furaha furaha kumbuyuutarka, wuxuu la jaan qaadayaa iftiinka iyo qaabka mugdiga ah ee macOS Mojave ...
Es Waxa ay taageertaa shaqada boodhka caalamiga ah, MacOS function kaas oo noo ogolaanaya in aan ku dhajino waxyaabaha la koobiyeeyay qalab kale oo leh isla ID Apple, taageertaa Touch Bar, u taagan links, qoraalka, jadwalka dhacdooyinka kala duwan, taageertaa View Degdegga ah si ay u daawato sawirada, links ama qoraallada ...
baastada waa la jaan qaada Apple oo ay maamusho Apple's M1 chip, waxay u baahan tahay macOS 10.12 ama ka dib, waxay diyaar u tahay soo dejinta bilaashka ah iyada oo xaddidan 20 jajab. Haddii aad rabto inaad ka saarto xadkaas oo aad furto dhammaan hawlaha, waxaad isticmaali kartaa iibsashada gudaha codsiga oo leh qiimo 8,99 euro.
Si aad u noqoto app ugu fiican, waa in ay ogolaato in ay la jaanqaadi karto waxyaabaha ku jira qalabyada kale iyada oo loo marayo iCloud oo ay bixiso codsiga macruufka. Si kastaba ha noqotee, isticmaalayaasha raba inay maareeyaan nuxurka ay ku koobiyan Mac-gooda waa ku fiican tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Mac App Store » Baastada, sanduuqa ka samaysan ee macOS runtii u baahan yahay
Aad ayey uga fiican tahay PastePal. Kahor intaanan isticmaalin Baasto laakiin ma jiro midab marka loo eego PastePal.